အပြောစစ်ဆေးမှုတွင် ကိုယ့်အကြောင်းကို ပြောပုံပြောနည်း - Myanmar Network
အပြောစစ်ဆေးမှုတွင် ကိုယ့်အကြောင်းကို ပြောပုံပြောနည်း
Posted by Myanmar Network Forum Moderator3 on June 15, 2015 at 13:48 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ်ပြောခြင်းသည် အင်္ဂလိပ်ဘာသာအရည်အခြင်းစစ် စာမေးပွဲများ၏ အပြောစစ်ဆေးမှုတစ်ခု၏ အစ၌ပြုလုပ်လေ့ရှိသော စစ်ဆေးမှုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သင့်အနေဖြင့် ၎င်းကိုအိမ်မှာပင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီး လေ့ကျင့်နိုင်ပါသည်။ ဘာပြောရမယ်ဆိုတာကို သိနေရင် သင်သည် စစ်ဆေးမှု၏အစတွင် စိတ်သက်သက်သာသာရှိမှာ ဖြစ်တဲ့အပြင်ယုံကြည်စိတ်ပါရှိနေမှာဖြစ်ပါသည်။
ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ်ပြောနိုင်ရန် အကောင်းဆုံးအကြံပြုချက်များကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
မေးနိုင်သည့်အကြောင်းအရာများနှင့် မေးခွန်းများကို စာမေးပွဲမတိုင်မီ စဉ်းစားထားပါ။ ကျောင်း၊ မိသားစု၊ အားလပ်ချိန်၊ နေ့စဉ်လုပ်ငန်းများနှင့် အနာဂတ်အတွက် အစီအစဉ်များ- စသည်တို့မှာ မေးလေ့မေးထရှိသော အကြောင်းအရာများ ဖြစ်ပါသည်။
သင့်အကြောင်းနှင့် ပတ်သက်သော ရိုးရှင်းသည့်မေးခွန်းများ ဖြေခြင်းကိုလေ့ကျင့်ပါ။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နှင့် လေ့ကျင့်ပါ(သို့) သင်ပြောတာကို အသံဖမ်းထားပြီး ပြန်နားထောင်ပါ။
မေးခွန်းများကို သေသေချာချာနားထောင်ပါ။ နားမလည်ပါက ဆရာကို ပြန်ပြောခိုင်းပါ။
စာစစ်သူကိုကြည့်ပါ။ မေးခွန်းကို ပြည့်စုံစွာ ဖြေပါ။ သင်ပြောတာ လုံလောက်ပြီဖြစ်၍ နောက်မေးခွန်းကိုမေးရန်အသင့်ဖြစ်နေပြီ ဖြစ်ကြောင်းကို သူ၏ မျက်နှာကဖော်ပြနေနိုင်ပါသည်။
အဖြေများကို အလွတ်ကျက်မသွားပါနှင့်။ စိတ်ကူးများအသင့်ရှိနေခြင်းသည် ကောင်းသော်လည်း မေးနေကျမေးခွန်းများ ၏အဖြေအရှည်ကြီးများကို အလွတ်ကျက်မသွားတာက ပိုကောင်းပါသည်။
‘Yes’ (သို့) ‘No’ ထည့်ဖြေပါ။
မျှော်လင့်မထားသောမေးခွန်းအမေးခံရပါက ထိတ်လန့်မသွားပါနှင့်။ မဖြေခင် စက္ကန့်အနည်းငယ်ယူပြီးစဉ်းစားပါ။
My name’s ____ (ကျွန်တော့်နာမည်က ____ ဖြစ်ပါတယ်။)
I'm from ____ / I live in ____ (ကျွန်တော် ____ ကလာပါတယ်။/ ကျွန်တော် ____ နေပါတယ်။ )
I was born in ____ (ကျွန်တော့် ____ မှာ မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။)
I'm ____ years old (ကျွန်တော့်အသက် ____ ရှိပါပြီ။)
I go to ____ school (ကျွန်တော် ____ မှာ ကျောင်းတက်ပါတယ်။)
I don’t like ____ because ____ ( ကျွန်တော် ____ ကို မကြိုက်ပါ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ____ လို့ဖြစ်ပါတယ်။)
In my free time/ After school ____ (အားလပ်ချိန်မှာ/ကျောင်းဆင်းပြီးတဲ့အခါ ____)
My best friends are ____ because ____ (ကျွန်တော့်အခင်ဆုံးသူငယ်ချင်းတွေကတော့ ____ ဖြစ်ပါတယ် /ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ____)
My favourite (school subject, actor, pop group, sport) is ____ because ____
(ကျွန်တော့်အကြိုက်ဆုံး ဘာသာရပ်၊ မင်းသား၊ ခေတ်ပေါ်ဂီတအဖွဲ့ကတော့ ____ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ____)
I have ____ brothers and sisters. (ကျွန်တော့်မှာ ညီအစ်ကိုမောင်နှမ ____ ရှိပါတယ်။)
In the future, I’d like to ____ because ____
(အနာဂတ်မှာ ကျွန်တော် ____ ဖြစ်ချင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ____)
နမူနာပြောထားသည့် ဗီဒီယိုကို http://learnenglishteens.britishcouncil.org/exams/speaking-exams/ta... တွင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
အထက်ဖော်ပြပါ ဗီဒီယိုဖိုင်၏ စာသားများကို အောက်တွင်မြန်မာဘာသာသို့ပြန်ဆိုထားပါတယ်။
Examiner : Hi. What’s your name?
စစ်ဆေးသူ - ဟိုင်း၊ မင်းနာမည် ဘယ်သူလဲ?
Kelvin : My name is Kelvin.
ကယ်(လ်)ဗင် - ကျွန်တော့်နာမည် ကယ်(လ်)ဗင်ပါ။
Examiner : Kelvin, Ok. So, Kelvin, I’m going to ask youafew questions. I’d like to ask you about your school. So, what subjects do you like most?
စစ်ဆေးသူ - ကယ်(လ်)ဗင်၊ ကောင်းပြီ။ ဒါဖြင့် ကယ်(လ်)ဗင် မင်းကို ဆရာမေးခွန်းနဲနဲလောက်မေးမယ်။ မင်းရဲ့ကျောင်း အကြောင်းကိုမေးချင်တယ်။ ကဲ မင်းဘယ်ဘာသာတွေကို အကြိုက်ဆုံးလဲ။
Kelvin : I think I like economics most because I can study different kinds of demand and supply theory and I can use it in my daily life to observe the market. I think that’s very interesting, yeah, and very useful.
ကယ်(လ်)ဗင် - ကျွန်တော်ဘောဂဗေဒကို အကြိုက်ဆုံးလို့ ထင်တာပဲ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ၀ယ်အားနဲ့ရောင်းအား အမျိုးမျိုးအကြောင်းကို လေ့လာနိုင်တဲ့အပြင် ကျွန်တော်နေ့စဉ်ဘ၀မှာလည်း အရောင်းအ၀ယ်ကို လေ့လာဖို့ အသုံးချနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ အဲဒါအရမ်းစိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဟုတ်တယ်- ဒါ့အပြင် အရမ်းလည်း အသုံးဝင်ပါတယ်။
Examiner : Ok. And are there any subjects that you don’t like so much?
စစ်ဆေးသူ - ကောင်းပါပြီ။ မင်းသိပ်မကြိုက်တဲ့ ဘာသာတွေကောရှိသလား?
Kelvin : Actually, I don’t like physics too much because I need to calculate many difficult questions and all those mathematics words. I’m not really used to them. So, I don’t like physics.
ကယ်(လ်)ဗင် - အမှန်ပြောရရင်တော့ ကျွန်တော်ရူပဗေဒကို သိပ်မကြိုက်ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ခက်ခဲတဲ့မေးခွန်း တွေကို တွက်ရပြီး များပြားလှတဲ့ သင်္ချာဝေါဟာရတွေကြောင့်ပဲ။ အဲဒါတွေကို ကျွန်တော်သိပ်ကျင့် သားမရသေးဘူး။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်ရူပဗေဒကို မကြိုက်ဘူး။
Examiner : I see All right. Well, how about in the future? Are you hoping to go to university?
စစ်ဆေးသူ - သဘောပေါက်ပြီ။ ကောင်းပါပြီ။ ကဲအနာဂတ်အတွက်ကရော? တက္ကသိုလ်တက်ဖို့ မျှော်လင့်ထားလား?
Kelvin : Yeah, sure.
ကယ်(လ်)ဗင် - ဟုတ်ကဲ့ - သေချာတာပေါ့ ခင်ဗျာ။
Examiner : Ok, and what would you like to study there?
စစ်ဆေးသူ - ကောင်းပြီ - ဒါဆိုရင် အဲဒီကျရင်ဘာကိုသင်ယူမှာလဲ?
Kelvin : I think I would like to study something about business. So, I think nowadays we can only makealot of money by participating in the financial sectors. So, I would like to study something about financial business. I want to get rich, yes.
ကယ်(လ်)ဗင် - ကျွန်တော်ကတော့ စီးပွာေးရးနဲ့ ပတ်သက်တာကို သင်ယူချင်ပါတယ်။ ဒီခေတ်မှာ ငွေရေးကြေးရေး နယ်ပယ်မှာ ပါဝင်လှုပ်ရှားနိုင်မှာ ပိုက်ဆံအများကြီး ရှာနိုင်မယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ငွေရေးကြေးရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စီးပွားရေးဘာသာရပ်တစ်ခုခုကို ကျွန်တော်သင်ယူချင်ပါတယ်။ ဟုတ်တယ် ကျွန်တော်ချမ်းသာချင်ပါတယ်။
Examiner : Ok, that’s great Thanks, Kelvin.
စစ်ဆေးသူ - ကောင်းပြီ။ ကျေးဇူးပဲ ကယ်(လ်)ဗင်။
Examiner : Hi, what’s your name?
စစ်ဆေးသူ - မင်းနာမည်က ဘာလဲ?
Melissa : My name is Melissa.
မယ်လီဆာ - ကျွန်မ နာမည်က မယ်လီဆာပါ။
Examiner : Hi, Melissa. And, can you tell me about your family?
စစ်ဆေးသူ - ဟိုင်း- မယ်လီဆာ။ မင်းရဲ့ မိသားစုအကြောင်းပြောပြနိုင်မလား?
Melissa : I've got no sisters and brothers. I live with my father and mother and my dog.
မယ်လီဆာ - ကျွန်မမှာ ညီအစ်ကိုမောင်နှမမရှိပါဘူး။ ကျွန်မ အဖေနဲ့ အမေနဲ့ ပြီးတော့ ကျွန်မခွေးနဲ့နေပါတယ်။
Examiner : And your dog?
စစ်ဆေးသူ - မင်းရဲ့ခွေး?
Melissa : Yeah!
မယ်လီဆာ - ဟုတ်ပါတယ်။
Examiner : Great. All right, I’d like to ask youafew questions about your school. So first, what subjects do you like most?
စစ်ဆေးသူ - ကောင်းပါပြီ။ မင်းကို မင်းရဲ့ကျောင်းအကြောင်း ဆရာမမေးခွန်းနဲနဲမေးချင်တယ်။ ကဲ ပထမဦးဆုံးက ဘယ်ဘာသာတွေကို မင်းအကြိုက်ဆုံးလဲ?
Melissa : I like mathematics the most because I think it’s satisfying to calculate the solution.
မယ်လီဆာ - ကျွန်မသင်္ချာအကြိုက်ဆုံး၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အဖြေရအောင်တွက်ရတာ စိတ်ကျေနပ်စရာကောင်း လို့လေ။
Examiner : OK.So, mathematics - is there any other one?
စစ်ဆေးသူ - ကောင်းပြီ။ အဲဒီတော့ သင်္ချာ။ တခြားကောရှိသေးလား?
Melissa : And English, I think, because it’s fun to learnalanguage.
မယ်လီဆာ - ပြီးတော့ အင်္ဂလိပ်စာလို့ထင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဘာသာစကားတစ်ခုခုကို သင်ရတာ ပျော်စရာကောင်းတယ်လေ။
Examiner : Great, Ok. Which subject do you think are most useful for you?
စစ်ဆေးသူ - ဟုတ်ပါပြီ။ ဘယ်ဘာသာတွေက မင်းအတွက်အသုံးဝင်ဆုံးလို့ထင်သလဲ?
Melissa : I think accounting is the most useful because every company needs an accountant and to be an accountant I need to study this subject.
မယ်လီဆာ - စာရင်းကိုင်ပညာက အသုံးဝင်ဆုံးလို့ ကျွန်မထင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကုမ္ပဏီတိုင်းက စာရင်းကိုင် တစ်ယောက်လောက်တော့ လိုတဲ့အပြင် စာရင်းကိုင်တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင် ဒီဘာသာကို သင်ဖို့လိုပါတယ်။
Examiner : Sure, Ok. And are other any subjects that you don’t like?
စစ်ဆေးသူ - သေချာတာပေါ့။ ကောင်းပါပြီ။ မင်းမကြိုက်တဲ့ ဘာသာတွေကောရှိသလား?
Melissa : I hate Chinese because it’s difficult to study the passages. Yeah, and I don’t really understand what it’s about.
မယ်လီဆာ - တရုတ်စာကိုမုန်းတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ စာပိုဒ်တွေကို သင်ရတာခက်လို့လေ။ ဟုတ်တယ် ပြီးတော့ ဘာအကြောင်းလဲဆိုတာကိုလည်း တကယ်နားမလည်ဘူးလေ။
Examiner : Ok, that’s great. Thanks, Melissa.
စစ်ဆေးသူ - ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မယ်လီဆာ။
Learnenglishteens.britishcouncil.org မှ Talk about yourself ကို ဘာသာပြန်ထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
မူရင်းဆောင်းပါးနှင့် ဗီဒီယိုကို ဒီနေရာတွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
ကိုယျ့အကွောငျးကိုယျပွောခွငျးသညျ အင်ျဂလိပျဘာသာအရညျအခွငျးစဈ စာမေးပှဲမြား၏ အပွောစဈဆေးမှုတဈခု၏ အစ၌ပွုလုပျလရှေိ့သော စဈဆေးမှုတဈခုဖွဈပါသညျ။ သငျ့အနဖွေငျ့ ၎င်းငျးကိုအိမျမှာပငျကွိုတငျပွငျဆငျပွီး လကေ့ငျြ့နိုငျပါသညျ။ ဘာပွောရမယျဆိုတာကို သိနရေငျ သငျသညျ စဈဆေးမှု၏အစတှငျ စိတျသကျသကျသာသာရှိမှာ ဖွဈတဲ့အပွငျယုံကွညျစိတျပါရှိနမှောဖွဈပါသညျ။
ကိုယျ့အကွောငျးကိုယျပွောနိုငျရနျ အကောငျးဆုံးအကွံပွုခကျြမြားကို ဖျောပွလိုကျပါတယျ။
မေးနိုငျသညျ့အကွောငျးအရာမြားနှငျ့ မေးခှနျးမြားကို စာမေးပှဲမတိုငျမီ စဉျးစားထားပါ။ ကြောငျး၊ မိသားစု၊ အားလပျခြိနျ၊ နစေ့ဉျလုပျငနျးမြားနှငျ့ အနာဂတျအတှကျ အစီအစဉျမြား- စသညျတို့မှာ မေးလမေ့ေးထရှိသော အကွောငျးအရာမြား ဖွဈပါသညျ။
သငျ့အကွောငျးနှငျ့ ပတျသကျသော ရိုးရှငျးသညျ့မေးခှနျးမြား ဖွခွေငျးကိုလကေ့ငျြ့ပါ။ သူငယျခငျြးတဈယောကျနှငျ့ လကေ့ငျြ့ပါ(သို့) သငျပွောတာကို အသံဖမျးထားပွီး ပွနျနားထောငျပါ။
မေးခှနျးမြားကို သသေခြောခြာနားထောငျပါ။ နားမလညျပါက ဆရာကို ပွနျပွောခိုငျးပါ။
စာစဈသူကိုကွညျ့ပါ။ မေးခှနျးကို ပွညျ့စုံစှာ ဖွပေါ။ သငျပွောတာ လုံလောကျပွီဖွဈ၍ နောကျမေးခှနျးကိုမေးရနျအသငျ့ဖွဈနပွေီ ဖွဈကွောငျးကို သူ၏ မကျြနှာကဖျောပွနနေိုငျပါသညျ။
အဖွမြေားကို အလှတျကကျြမသှားပါနှငျ့။ စိတျကူးမြားအသငျ့ရှိနခွေငျးသညျ ကောငျးသျောလညျး မေးနကေမြေးခှနျးမြား ၏အဖွအေရှညျကွီးမြားကို အလှတျကကျြမသှားတာက ပိုကောငျးပါသညျ။
‘Yes’ (သို့) ‘No’ ထညျ့ဖွပေါ။
မြှျောလငျ့မထားသောမေးခှနျးအမေးခံရပါက ထိတျလနျ့မသှားပါနှငျ့။ မဖွခေငျ စက်ကနျ့အနညျးငယျယူပွီးစဉျးစားပါ။
My name’s ____ (ကြှနျတေျာ့နာမညျက ____ ဖွဈပါတယျ။)
I'm from ____ / I live in ____ (ကြှနျတျော ____ ကလာပါတယျ။/ ကြှနျတျော ____ နပေါတယျ။ )
I was born in ____ (ကြှနျတေျာ့ ____ မှာ မှေးဖှားခဲ့ပါတယျ။)
I'm ____ years old (ကြှနျတေျာ့အသကျ ____ ရှိပါပွီ။)
I go to ____ school (ကြှနျတျော ____ မှာ ကြောငျးတကျပါတယျ။)
I don’t like ____ because ____ ( ကြှနျတျော ____ ကို မကွိုကျပါ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ ____ လို့ဖွဈပါတယျ။)
In my free time/ After school ____ (အားလပျခြိနျမှာ/ကြောငျးဆငျးပွီးတဲ့အခါ ____)
My best friends are ____ because ____ (ကြှနျတေျာ့အခငျဆုံးသူငယျခငျြးတှကေတော့ ____ ဖွဈပါတယျ /ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ ____)
(ကြှနျတေျာ့အကွိုကျဆုံး ဘာသာရပျ၊ မငျးသား၊ ခတျေပျေါဂီတအဖှဲ့ကတော့ ____ ဖွဈပါတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ ____)
I have ____ brothers and sisters. (ကြှနျတေျာ့မှာ ညီအဈကိုမောငျနှမ ____ ရှိပါတယျ။)
(အနာဂတျမှာ ကြှနျတျော ____ ဖွဈခငျြပါတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ ____)
နမူနာပွောထားသညျ့ ဗီဒီယိုကို http://learnenglishteens.britishcouncil.org/exams/speaking-exams/ta... တှငျကွညျ့ရှုနိုငျပါသညျ။
အထကျဖျောပွပါ ဗီဒီယိုဖိုငျ၏ စာသားမြားကို အောကျတှငျမွနျမာဘာသာသို့ပွနျဆိုထားပါတယျ။
စဈဆေးသူ - ဟိုငျး၊ မငျးနာမညျ ဘယျသူလဲ?
ကယျ(လျ)ဗငျ - ကြှနျတေျာ့နာမညျ ကယျ(လျ)ဗငျပါ။
စဈဆေးသူ - ကယျ(လျ)ဗငျ၊ ကောငျးပွီ။ ဒါဖွငျ့ ကယျ(လျ)ဗငျ မငျးကို ဆရာမေးခှနျးနဲနဲလောကျမေးမယျ။ မငျးရဲ့ကြောငျး အကွောငျးကိုမေးခငျြတယျ။ ကဲ မငျးဘယျဘာသာတှကေို အကွိုကျဆုံးလဲ။
ကယျ(လျ)ဗငျ - ကြှနျတျောဘောဂဗဒေကို အကွိုကျဆုံးလို့ ထငျတာပဲ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ ဝယျအားနဲ့ရောငျးအား အမြိုးမြိုးအကွောငျးကို လလေ့ာနိုငျတဲ့အပွငျ ကြှနျတျောနစေ့ဉျဘဝမှာလညျး အရောငျးအဝယျကို လလေ့ာဖို့ အသုံးခနြိုငျပါတယျ။ ကြှနျတျောကတော့ အဲဒါအရမျးစိတျဝငျစားစရာ ကောငျးတယျလို့ ထငျပါတယျ။ ဟုတျတယျ- ဒါ့အပွငျ အရမျးလညျး အသုံးဝငျပါတယျ။
စဈဆေးသူ - ကောငျးပါပွီ။ မငျးသိပျမကွိုကျတဲ့ ဘာသာတှကေောရှိသလား?
ကယျ(လျ)ဗငျ - အမှနျပွောရရငျတော့ ကြှနျတျောရူပဗဒေကို သိပျမကွိုကျဘူး။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ ခကျခဲတဲ့မေးခှနျး တှကေို တှကျရပွီး မြားပွားလှတဲ့ သင်ျခြာဝေါဟာရတှကွေောငျ့ပဲ။ အဲဒါတှကေို ကြှနျတျောသိပျကငျြ့ သားမရသေးဘူး။ ဒါကွောငျ့ ကြှနျတျောရူပဗဒေကို မကွိုကျဘူး။
စဈဆေးသူ - သဘောပေါကျပွီ။ ကောငျးပါပွီ။ ကဲအနာဂတျအတှကျကရော? တက်ကသိုလျတကျဖို့ မြှျောလငျ့ထားလား?
ကယျ(လျ)ဗငျ - ဟုတျကဲ့ - သခြောတာပေါ့ ခငျဗြာ။
စဈဆေးသူ - ကောငျးပွီ - ဒါဆိုရငျ အဲဒီကရြငျဘာကိုသငျယူမှာလဲ?
ကယျ(လျ)ဗငျ - ကြှနျတျောကတော့ စီးပှာေးရးနဲ့ ပတျသကျတာကို သငျယူခငျြပါတယျ။ ဒီခတျေမှာ ငှရေေးကွေးရေး နယျပယျမှာ ပါဝငျလှုပျရှားနိုငျမှာ ပိုကျဆံအမြားကွီး ရှာနိုငျမယျလို့ ကြှနျတျောထငျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ငှရေေးကွေးရေးနဲ့ ပတျသကျတဲ့ စီးပှားရေးဘာသာရပျတဈခုခုကို ကြှနျတျောသငျယူခငျြပါတယျ။ ဟုတျတယျ ကြှနျတျောခမျြးသာခငျြပါတယျ။
စဈဆေးသူ - ကောငျးပွီ။ ကြေးဇူးပဲ ကယျ(လျ)ဗငျ။
စဈဆေးသူ - မငျးနာမညျက ဘာလဲ?
မယျလီဆာ - ကြှနျမ နာမညျက မယျလီဆာပါ။
စဈဆေးသူ - ဟိုငျး- မယျလီဆာ။ မငျးရဲ့ မိသားစုအကွောငျးပွောပွနိုငျမလား?
မယျလီဆာ - ကြှနျမမှာ ညီအဈကိုမောငျနှမမရှိပါဘူး။ ကြှနျမ အဖနေဲ့ အမနေဲ့ ပွီးတော့ ကြှနျမခှေးနဲ့နပေါတယျ။
စဈဆေးသူ - မငျးရဲ့ခှေး?
မယျလီဆာ - ဟုတျပါတယျ။
စဈဆေးသူ - ကောငျးပါပွီ။ မငျးကို မငျးရဲ့ကြောငျးအကွောငျး ဆရာမမေးခှနျးနဲနဲမေးခငျြတယျ။ ကဲ ပထမဦးဆုံးက ဘယျဘာသာတှကေို မငျးအကွိုကျဆုံးလဲ?
မယျလီဆာ - ကြှနျမသင်ျခြာအကွိုကျဆုံး၊ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ အဖွရေအောငျတှကျရတာ စိတျကနြေပျစရာကောငျး လို့လေ။
စဈဆေးသူ - ကောငျးပွီ။ အဲဒီတော့ သင်ျခြာ။ တခွားကောရှိသေးလား?
မယျလီဆာ - ပွီးတော့ အင်ျဂလိပျစာလို့ထငျပါတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ ဘာသာစကားတဈခုခုကို သငျရတာ ပြျောစရာကောငျးတယျလေ။
စဈဆေးသူ - ဟုတျပါပွီ။ ဘယျဘာသာတှကေ မငျးအတှကျအသုံးဝငျဆုံးလို့ထငျသလဲ?
မယျလီဆာ - စာရငျးကိုငျပညာက အသုံးဝငျဆုံးလို့ ကြှနျမထငျပါတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ ကုမ်ပဏီတိုငျးက စာရငျးကိုငျ တဈယောကျလောကျတော့ လိုတဲ့အပွငျ စာရငျးကိုငျတဈယောကျဖွဈဖို့ဆိုရငျ ဒီဘာသာကို သငျဖို့လိုပါတယျ။
စဈဆေးသူ - သခြောတာပေါ့။ ကောငျးပါပွီ။ မငျးမကွိုကျတဲ့ ဘာသာတှကေောရှိသလား?
မယျလီဆာ - တရုတျစာကိုမုနျးတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ စာပိုဒျတှကေို သငျရတာခကျလို့လေ။ ဟုတျတယျ ပွီးတော့ ဘာအကွောငျးလဲဆိုတာကိုလညျး တကယျနားမလညျဘူးလေ။
စဈဆေးသူ - ကြေးဇူးတငျပါတယျ မယျလီဆာ။
Learnenglishteens.britishcouncil.org မှ Talk about yourself ကို ဘာသာပွနျထားခွငျး ဖွဈပါတယျ။
မူရငျးဆောငျးပါးနှငျ့ ဗီဒီယိုကို ဒီနရောတှငျ ဖတျရှုနိုငျပါတယျ။
Permalink Reply by wintphyukokomg on June 27, 2015 at 21:24
Permalink Reply by Kyaw win on July 11, 2015 at 10:16
Permalink Reply by Zaw Hteik on October 25, 2015 at 5:22
Permalink Reply by Mg Zar Ni on October 25, 2015 at 9:36
Permalink Reply by Win Zaw Thu on February 5, 2016 at 11:34
How do me ? when i speaking to other and
iwant to teach with videos,help me
Permalink Reply by Noe Noe on February 15, 2016 at 11:47
And how can I download audio file .Help me please !!
Permalink Reply by htaylim on February 16, 2016 at 13:41